Sawirro: Wasiirka Difaaca Soomaaliya oo kormeeray aagagga hore ee ciidamada Juba iyo Amiosm – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Jen. C/qaadir Sheekh Cali Diini, oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa maanta kormeer howleed ku tagey jiida hore ee fariisimaha ay dagan yihiin ciidamadda ka howlgala aagga Jubbooyinka iyo Ciidamadda AMISOM gaar ahan deegaanka Buulo-guduud oo qiyaastii 30 KM u jira magaalada Kismaayo, waxana uu halkaas kulamo kula qaatay saraakiisha Dowladda iyo kuwa AMISOM.
Ugu horeyn, Wasiirka oo ay weheliyaan masuuliyiin ka tirsan maamulka KMG ah ee Jubba, ayaa kormeer indho-indhayn ah ku tagay xarun ay dagan yihiin Ciidamaddu oo ku taala duleedka magaalada Kismaayo, waxana uu ugu hambalyeeyey Ciidamada ku sugan aagga dagaalka guulaha ay soo hooyeen, isagoo halkaasi kula qaatay qaar ka mid ah saraakiisha hor kacaysa Ciidamadaasi.
Wasiirka Gaashaandhigga C/qaadir Sheekh Cali Diini, ayaa geesta kale booqasho ku tagey fariisimaha ay ka dagan yihiin ciidamadda ee deegaanka Buulo-guduud, taas oo kamid ah goobaha ay isku horfadhiyaan ciidamadda Dowladda iyo Al-shabaab.
Wasiirka oo la hadlayay Ciidamadda ayaa yiri.
“Waxaan arkayaa Ciidamo diyaar u ah difaaca dalkooda Hooyo, kana go’an tahay in ay ka xoreeyaan dalka cadowga kusoo duulay, maanta waxaan halkan u joognaa dhamaanteen gudahasha masuuliyadda ina saaran ee ah difaca dalka, waxaan ku weynay difaacan dhalinyaro iyo dad nagu qaali ahaa, mar walba oo dagaal lagu jira tani oo kale waa dhacaysaa, laakiin isku duubni iyo wadaninimo ayaa looga gudbi karaa”.
“Waxaan sii wadi doonaan taageerada iyo isgarabtaagiina, inagoo og duruufaha adag ee jira, hadana ma niyad jabayno, waxaan doonaynaa dhismaha ciidan qaran oo leh muuqaal iyo astaan qaran, kaasi oo la’aantiis aan qaran meel gaari Karin”ayuu yiri Wasiirka Difaaca Mudane C/qaadir Sh. Cali Diini.
Wasiirka Gaashaandhigga, ayaa hoosta ka xariiqay sida ay dowladda Soomaaliya uga go’an tahay dhismaha ciidamadda Xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoo la marayo nidaam ku dhisan caddaalad iyo sinaan, isla markaana ka huffan eex iyo dhinac gooni ah.